မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): လူပျိုတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ အပျိုမလေး သေသွားတဲ့နေ့ရဲ့ အသုဘည…။ ( ကြောက်ဒူးတွေတောင်တုန်လာတယ်)
လူပျိုတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ အပျိုမလေး သေသွားတဲ့နေ့ရဲ့ အသုဘည…။ ( ကြောက်ဒူးတွေတောင်တုန်လာတယ်)
“သရဲ ၊ နာနာဘာဝ တွေကို မကြောက်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေ ဖတ်ကြည့်ပါ”
ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ခပ်လန်းလန်း ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျ..။ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ… ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း တစ်သိုက်လုံး တစ်ယောက် မကျန် ၀ိုင်းကြောင်ကြတာပေါ့ဗျာ… ဒါပေမယ့်.. ဖြစ်ဖြစ် မြောက်မြောက် တစ်ကောင်မှ မရှိတဲ့ အတွက် မရလိုက်ပါဘူး..။ ဟိုလူလိုလို ဒီလူလိုလိုနဲ့ ပါးစပ်အရသာ ခံရင်း ကောင်မလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲက ဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘူး..။
တစ်နေ့……. ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းက ကောင်မလေး ဆုံးသွားပြီတဲ့..။ ညနေ ကျောင်းကအပြန်မှာ ဆိုင်ကယ် ကားနဲ့ ၀င်တိုက်တာ ပွဲချင်းပြီးဆိုပဲ…။ ကျွန်တော်တို့ တစ်သိုက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံက လွဲပြီး ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလေ…။ ညနေကျတော့ လူစုပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဝေယျာဝစ္စတွေ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း တစ်သိုက် ထွက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ…။
ကောင်မလေးက တစ်ဦးတည်းသော သမီးပါ..။ မိသားစုက အရမ်း မချမ်းသာတဲ့ လူလတ်တန်းစားထဲကပါ..။ အဖေရော အမေရော အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီး ကောင်မလေးကလည်း တက္ကသိုလ်မှာ M.A ဆက်တက်နေတာ ဆိုတော့ ပညာတတ် မိသားစုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်..။
ကျွန်တော်တို့ ရောက်သွားတော့ ကောင်မလေး မိဘတွေကို မြင်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ..။ ငိုထားရလွန်းလို့ မျက်လုံးတွေမို့နေပြီး အမေဖြစ်သူဆိုရင် အသံဝင်ပြီး အသံတောင် မထွက်ချင်တော့ပါဘူး..။ ကျွန်တော်တို့လည်း သတင်းမေး..နှစ်သိမ့်ပြီး.. မဏ္ဍပ်ဆောက်ဖို့နဲ့ အခြားဝေယျာဝစ္စတွေ လုပ်ဖို့အတွက် တာဝန်ကိုယ်စီ ခွဲယူပြီး ဆောင်ရွက်ပါတော့တယ်…။
ကောင်မလေးတို့ မိသားစုက ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲကို ပြောင်းလာတာ သိပ်မကြာသေးတာကြောင့် အသိ မိတ်ဆွေတွေ သိပ်မရှိပါဘူး..။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ လာလိုက်တာ မှန်သွားတယ်..။ မဟုတ်ရင် သူတို့ အားငယ်နေမှာ သေချာတယ်..။ ခဏကြာတော့ အန်တီက
“ဒီမှာ ညအိပ်ပေးပါလား သားရယ်..၊ အန်တီတို့က နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့..”
“ရပါတယ် အန်တီရယ်…. စိတ်မပူပါနဲ့… ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖွဲ့လုံး ညလုံးပေါက် ရှိမှာပါ…” ဆိုပြီး ကျွန်တော် အားပေးနှစ်သိမ့်လိုက်တယ်..။
ပြောရအုံးမယ်..။ ကောင်မလေးက ကားတိုက်ပြီး ပွဲချင်းပြီး ဆုံးတာဆိုတော့ သူ့အလောင်းကို အိမ်သယ်လို့ မရဘူးဗျ..။ ဆေးရုံက ရင်ခွင်ရုံမှာ ထားရတယ်..။
ဒီလိုနဲ့ မိုးလည်းချုပ်လာရော.. မီးလုံးတွေဖွင့်….. မြန်မာဓလေ့ ထုံးစံအတိုင်း ဖဲထုပ် ၀ယ်တဲ့သူက၀ယ်ပြီး ၀ိုင်းတွေ အသီးသီး စလိုက်ကြတယ်..။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့ မ၀င်သေးပဲ ဝေယျာဝစ္စတွေ လုပ်ကူနေတာပေါ့…။ ည (၁၁း၀၀) ကျော် (၁၂း၀၀) လောက်လည်းရောက်ရော စားပွဲပေါ်မှာ လူတွေ သိပ်မရှိတော့ဘူး..။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ၄ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်..။ ဇာတ်လမ်းက အဲ့ဒီမှာ စတာပဲဗျို့…။
ကျွန်တော်လေးယောက် ၀ိုင်းပြီး ဖဲထိုင်ရိုက်နေကြတယ်..။ အန်တီတို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာ ငူငူကြီး ထိုင်နေကြတယ်..။ ည (၁း၀၀) နာရီလောက်လည်း ရောက်ရော… အန်တီက..
ဆိုပြီး ခြံတံခါးဝကို ပြေးထွက်သွားတယ်…။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပြေးလိုက်သွားရတာပေါ့..။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာညာမေးတော့ ကောင်မလေးကို ခြံဝမှာတွေ့လိုက်တယ်တဲ့..၊ အိမ်ထဲကို အတင်းဝင်ချင်နေတာ ၀င်လို့ မရဖြစ်နေပုံပဲတဲ့..။ ကျွန်တော် နည်းနည်းတော့ ကြောက်သွားတယ်..။ ကိုယ်က ကြောက်နေရင် တခြားသူတွေ ပိုဆိုးနေမှာဆိုးတာနဲ့..
“သြော်..အန်တီရယ်.. အန်တီက ငိုထားလွန်းလို့ မျက်လုံးမို့ပြီး ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်တာပါ…” ဆိုပြီး နှစ်သိမ့်ပြီး အိမ်ထဲ ပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်..။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဖဲဆက်ရိုက်ဖြစ်တယ်..။ ကျွန်တော့်စိတ်က ဖဲဝိုင်းထဲမှာ မရှိဘူး..။ ခြံတံခါးဝကိုပဲ ရောက်နေတယ်..။ ခဏကြာတော့ ခြံတံခါးဝကို ဖျတ်ခနဲ ကြည့်လိုက်တော့ လားး လားးး… ကောင်မလေးဗျို့… ခြံတံခါးဝဖွင့်နေတာ.. ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းပဲ ..ကျွန်တော့်မြင်ကွင်းထဲကနေ ပြန်ပျောက်သွားတယ်..။
ကျွန်တော် ဝေခွဲမရဖြစ်နေတုန်းမှာ အန်တီက တစ်ခါ ပြေးဆင်းသွားပြီး ခြံတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်..။
ပြီးတော့ “သမီး… လာ….လာ…. အိမ်ထဲဝင်… ”
ဆိုပြီး လူတစ်ယောက်ကို လက်ဆွဲခေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ခြံထဲပြန်ခေါ်လာတယ်..။ တစ်ကယ်တော့ ဘာမှ မရှိဘူးဗျ…။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်..။ ကြမ်းခင်းသံ တကျွီကျွီနဲ့ မြည်သွားတယ်..။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်နားမှာ အနံ့ဆိုးကြီး တစ်ခုကို ကျွန်တော် ရလိုက်တယ်..။ ကျွန်တော် သိလိုက်ပြီ..။ ကောင် မလေး ကျွန်တော့်နားမှာ ၀င်ထိုင်နေလေပြီ..။
အန်တီကတော့ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ဘေးကနေရာကိုကြည့်ပြီး တတွတ်တွတ်ပြောနေတယ်..။ ဦးလေး ကလည်း ကြောက်လွန်းလို့ အသံတောင် မထွက်နိုင်ပဲ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း ငါးယောက်လုံးကတော့ ကြောင်ပြီး ကြည့်နေမိ ကြတယ်..။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကျွန်တော်ပေါ့..။ သူ ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ တစ်ကယ်ထိုင် နေတာ ကျွန်တော်သိတယ်..။ ပြင်းထန် ဆိုးဝါးတဲ့ အပုပ်နဲ့ကို ရှုရှိုက်ရင်း ကျွန်တော့် ကြောက်စိတ်က ငယ်ထိပ် ကိုရောက်နေတယ်..။ ကျွန်တော် နဖူးကချွေးတွေ တဒီးဒီး မျက်နှာပေါ်စီးကျနေတာကို သိပေမယ့် သုတ်ပစ်ဖို့ မပြောနဲ့ လူကို မလှုပ်ရဲဘဲ အသက်ကိုတောင် ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှုနေလိုက်တယ်…။
ခဏကြာတော့ အန်တီက.. “သမီး.. ဘယ်သွားမလို့လဲ..” ဆိုပြီး မေးလိုက်တယ်..။ ကြမ်းခင်း တကျွီကျွီ မြည်သံကို ကြားလိုက်ရပြန်တယ်.. ကျွန်တော်ပျော်သွားတယ်.. ဟုတ်တယ်လေ.. သူ့ဟာသူ သွားချင်တဲ့နေရာသွား ကျွန်တော့်နား ရှိမနေရင် ပြီးရောလေ..။
အန်တီက သူ့သမီးသွားတဲ့နေရာကို လိုက်ကြည့်နေတယ်ထင်တယ်.။ သူ့မျက်လုံးက ရွှေ့လျားနေတယ်..။ ခဏကြာတော့ အန်တီ့အကြည့်က ကျွန်တော့် တည့်တည့်မှာ..။ အောင်မလေး…… ကောင်မလေး ကျွန်တော့် နောက်ကျောမှာ ရပ်နေပီ…။
“သမီး…ဘာလုပ်မလို့လဲ… အဲ့လို မလုပ်ရဘူးလေ..သမီး..အဲ့ဒါ သမီးရဲ့ သူငယ်ချင်းလေ..” အန်တီက ထိတ်လန့်စွာနဲ့ အော်ပြောလိုက်တယ်..။
ကျွန်တော် လည်း မျက်စိမှိတ်နေလိုက်ပြီး ရသမျှ ဘုရားစာတွေ စိတ်ထဲကနေ ရွတ်ဆိုနေလိုက်တယ်..။ ဟိုသကောင့်သားလေးကောင်နဲ့ ဦးလေးဆီကလည်း ဘာသံမှ မကြား…။ အကုန်လုံး ကြောက်ပြီး ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်ကုန်ကြပီထင်တာပဲ..။
“သမီး.. အဲ့လို မလုပ်နဲ့လို့ အမေ..ပြောနေတယ်နော်…အမေ့စကားနားထောင်စမ်း..”
ကျွန်တော်ကတော့ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ကျွန်တော် ဆက်မတွေးတော့ဘူး..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေလူလို့ သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် သဘောထားကာ ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာကို မြင်ယောင်ပြီး စိတ်ထဲကနေ မေတ္တာပို့ပေးလိုက်တယ်…။
ကောင်မလေး ကောင်းရာမွန်ရာ ဘ၀ကို ရောက်ပါစေ…
ခဏကြာတေ့ာ… ကျွန်တော် အသက်ရှုကြပ်သလို ခံစားလာရတယ်..။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘာမှ သဲသဲ ကွဲကွဲ မမြင်ရတော့ဘူး..။ အဲ့နောက်.. ကျွန်တော် ဘာမှ မသိတော့ဘူး…။
ကျွန်တော် ပြန်သတိရလာတော့ အိမ်ရောက်နေပြီ..။ ကျွန်တော်က ကုတင်ပေါ်မှာ.. ကုတင်ဘေး ပတ်ပတ်လည် မှာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျွန်တော့် မိသားစုကို တွေ့လိုက်ရတယ်..။
“ဟုတ်တယ် ဟရောင်.. ကောင်မလေးက မင်းကိုဝင်ပူးပြီး ငါတို့လေးယောက်ကို တံမြက်စည်း ဆွဲပြီး လိုက်ရိုက်တာဟေ့… ပြေးလိုက်ရတာကို မပြောနဲ့တော့..။ နောက်ပြီး မင်းပါးစပ်ကလည်း ပြောသေးတယ်…. သေနာကောင်တွေ… ငါ့ကို စချင်အုံးတဲ့..”
ကျွန်တော်တို့ နောက်ပိုင်း ကောင်မလေးအိမ်ကို မသွားဖြစ်ခဲ့ပါ..။ မသွားရဲတာကြောင့်လည်းပါသည်။ရက်လည် တဲ့ရက်အထိ အားလုံးအေးအေးဆေးဆေး ပြီးသွားတယ်လို့ ကြားရတော့ စိတ်ထဲမှာ တစ်ကယ်ပဲ ကောင်မလေး အတွက် ၀မ်းသာမိသည်…။ ငါတို့ ချစ်တဲ့ကောင်မလေးရေ…မင်းလေးကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေကွာ…။
Author Maungssk at 1:52:00 PM